2012-04-22 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဒါ​က​တော့ desktop ​က folder ​တွေ​နဲ့ ​ဖိုင်​တွေ software ​တွေ​ကို ​ဒီ​ဇိုင်း​ပြောင်း​တဲ့ desktop icon ​ကို​ပြောင်း​တဲ့ software ​ပါ. ​သ​ဘော​ကျ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​ကဲ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​လိမ့်​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်. ​အ​ထဲ​မှာ ​ထည့်​ဖို့ keygen ​ပါ ​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. ​လို​ချင်​ရင် download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​စက်​လေး​ခြင်း​ဘာ​ခြင်း ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး. ​ပေါ့​ပေါ့​ပါး​ပါး software ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​ကဲ​အောက်​မှာ ​ယူ​လိုက်​ကြ​ပါ။
Aspire 3830T Drivers For Window7Ultimate (x64 bit)
Window7Ultimate (x64 bit)
Download 3G Driver
3G Module Driver Huawei (6.0.1.271 )
3G Module Driver Huawei (2.0.6.706)
Download SATA AHCI Driver
Download Bluetooth Driver Broadcom 6.3.0.7300
Bluetooth Driver Atheros 7.2.0.60
Bluetooth Driver (4.0) Atheros 7.4.0.96
Bluetooth Driver (4.0) Broadcom 6.5.0.2200
Card Reader Driver Realtek 6.1.7600.74
Card Reader Driver Realtek 6.1.7601.85
Touchpad Driver ELANTECH 8.0.6.0
Touchpad Driver Synaptics 15.2.9.0
USB Driver (3.0) Renesas 2.0.26.0
VGA Driver NVIDIA 8.17.12.6721
VGA Driver Intel 8.15.10.2287
VGA Driver (Physx) NVIDIA 9.10.0514
Wireless LAN Driver Intel 14.0.1.2
Wireless LAN Driver Broadcom 5.100.235.19
Wireless LAN Driver Atheros 9.0.0.202
Aurora 3D Presentation 2012 (​နောက်​ဆုံး​ထွက်) (77.53 MB)
​ဘာ background ​လို​ချင်​လဲ၊ ​ဘာ effect ​လို​ချင်​လဲ၊ 3D ​ပုံ​စံ ​ဘယ်​လို​မျိုး ​လို​ချင်​သ​လဲ၊ ​စာ​သား​ကို 3D ​လုပ်​ချင်​တာ​လား၊ ​ပုံ​ကို​လား၊ ​ကြိုက်​တာ​လုပ် ​အ​ကုန်​ရ​တယ်. 3D ​လုပ်​တဲ့ software ​တွေ ​အ​များ​ကြီး​ရှိ ​ပေ​မယ့်. ​အ​ရမ်း​ကြီး​တဲ့​ဖိုင်​တွေ​ကို ​တင်​ပြီး​ခါ​ကျ​မှ ​ချွေး​ဒီး​ဒီး​ကျ​ပြီး ​အ​ဖျက်​ခံ​လိုက်​ရ​ရင် ​သေ​ရော၊ ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့်​မို့ ​ဆိုက်​လည်း​သေး​ရ​မယ်၊ ​အ​သုံး​လည်း ​အ​ရမ်း​ဝင်​တဲ့ ​အ​ခု Aurora 3D presentation 2012 ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ. ​အား​လုံး​ပဲ ​သ​ဘော​ကျ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​မိ​ပါ​တယ်. ​ကို​လို​ချင်​သ​လို ​လုပ်​စမ်း​ကြည့်​ပါ. ​နောက်​ဆုံး​ထွက်​တွေ ​ချည်း​ပါ​ပဲ. 3D crazy ​သ​မား​များ​အ​တွက် ​အ​သုံး​ဝင်​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​ကဲ​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
​ဒါ​က​တော့ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ​က​နေ flash ​အ​ဖြစ် ​ပြောင်း​ပေး​တဲ့ converter ​ပါ​ပဲ. IMTOO ​က​တော့ ​ထုတ်​လိုက်​ရင် ​ကောင်း​တာ​တွေ​ချည်း​ပဲ​လို့ ​မ​ဆို​လို​ပေ ​မယ့်. ​တော်​တော်​များ​များ​ဟာ ​တော်​တော်​ကောင်း​ကြ​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် converter ​ကို ​စ​သုံး​ဖြစ်​တာ​လည်း IMTOO ​ကို ​သ​ဘော​ကျ​ရင်း​က​နေ ​စ​သုံး​ဖြစ် ​သွား​တာ​ပါ. ​တစ်​ခြား converter ​တွေ​ထက် IMTOO ​က ​ထုတ်​တဲ့ converter ​တွေ​ရဲ့ Tools ​တွေ​ကို ​ပို​ပြီး ​သ​ဘော​ကျ​မိ​လို့​ပါ. ​ကဲ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. ​ကျွန်​တော်​ကိုယ်​တိုင် ​သုံး​ကြည့်​ပြီး​ပါ​ပြီ ​တော်​တော်​လေး​ကို ​ကောင်း​ပါ​တယ်. ​လို​ချင်​တဲ့ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ​ကို ​ထည့်​ပြီး ​လို​ချင်​တဲ့ ​အ​သံ​ဖိုင်​တွေ​ကို​ပါ ​ဆွဲ​ထည့်​ရုံ​ပါ​ပဲ. ​လွယ်​လွယ်​လေး​ပါ. ​လက်​နှေး​ရင်​တော့ ​သိ​တဲ့​အ​တိုင်း​ပဲ​နော်. ​မြန်​မြန်​သာ Download ​လုပ်​ထား​လိုက်​ပါ. ​ဆိုက်​သေး​သေး​လေး​ပါ. ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်​တော့ ​တင်​ပေး​နေ​ပါ​တယ်. ​ဖိုင်​တွေ​က​လည်း ​ဖျက်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော်​က ​လည်း ​နိုင်​သ​လောက် ​တင်​ပါ​တယ်. ​သံ​သ​ရာ​တော့ ​လည်​နေ​တာ​ပဲ. ​ဘာ​မ​ဆိုင် ​ညာ​မ​ဆိုင် tutorial movie ​တွေ​ပါ ​ဖျက်​ပစ်​ပါ ​တယ်. ​တော်​တော် ​စိတ်​ညစ်​စ​ရာ​ကောင်း​တယ်.